microsoft access problem ...suggest me pls :) - MYSTERY ZILLION
microsoft access problem ...suggest me pls :)
microsoft access လေ့လာနေတာ တစ်နေလို့
ကျနော် button ဆိုတဲ့ ဟာကို create ပြီး codingစမ်း ရေးမလို့
Build_Event ကို နှိပ် ပြီး code builder ကိုရွေးလို့ မရ လို့ ဒီ photo အတိုင်းပဲ ရောက်ရောက်သွားလို့ ကူညီပါအုံး,in the tutorial ,it's going to microsoft visual basic,but for me
new bie ပါ guid me pls thanks...! >
macro tool ကို ရောက်သွားတာ။ သူက action တွေကို လွယ်လင့် တကူ ထည့်လို့ ရအောင် လုပ်ထားပေးတာ။ coding မရေးတတ်တဲ့ သူတွေ အဆင်ပြေအောင်။
Visual Basic ကို ရောက်ချင်ရင်
Form Design ဘက်မှာ Button ကို select လုပ်။ Event ကို သွား။ onclick ကို mouse တင်လိုက်ရင် ... button လေးပေါ်လာမယ်။
theme က ဘယ် theme ကို သုံးတာလဲ ? expanded ကို support လုပ်တဲ့ theme ဟုတ်ရဲ့လား ?
အဲဒါကို နှိပ်လိုက်ပြီး code builder ကို ရွေးပေးဖို့လိုတယ်။
ဟုတ်တယ်အကို ကျနော် ဟာက ပထမတုံးက အဲ့လို box လေးပေါ်သေးတယ် macro builder /expression builder/code builder ဆိုပြီးပေါ်သေးတယ်
ပေါ်တုံးက code builder ကို ရွေး ပြီး ok နှိပ်သေးတယ် ဘာစာတန်းလဲမသိဘူး
မရဘူးလို့ပြောတယ် အဲ့ဒါနဲ့ maco နဲ့ expression တစ်ခုခုရွေးလိုက်ပါရော
နောက်တစ်ကြိမ် build event ကို နှိပ်ရင် ဒီပုံအတိုင်းပဲ တန်းရောက်နေတော့တာပဲဗျ
အရင်လိုမရွေးခိုင်းတော့ဘူး macro,expression ,code builder ဆိုပြီး...
guide me pls again,i m noob
thanks bro ko Saturn